Windows 8 တွင် zawgyi font အသုံးပြုနည်း | အိမ့်မှူးသော်
Kris 10:26 AM
thank you so much friend! you help mealot!
Hla Than Moe 7:56 PM
Thank you so much for your infos. Now I can see zawgyi font but zawgyi bey board cannot use. Pls advice me how to activate zawgyi board? thanks.
thank u so much bro . It helps mealot :)
ghost 2:19 PM
အကိုရေ ကျနော် ဆိုက်တခုမှာ share ပေးချင်လို့ ခွင့်တောင်းပါတယ် ဗျာ............
Gitty 7:30 PM
Thanksalot for sharing. Can read zawgyi font now. Could you please explain how to type in Zawgyi font.
chawsuu 2:45 PM
I can read but i can't type ..pls help !
အကိုရေ.....အကိုရဲ့ မျှဝေမှုအတွက်ကျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ.....ကျနော်စက်မှာအကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဘာစာမှမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ....ကျနော်လုပ်တာတခုခုများမှားနေလို့ လားမသိဘူး.....ကူညီပါဦးဗျာ....
ကျွန်တော် ဒီ အပေါ်က နည်းအတိုင်း လုပ်တာ မြန်မာ လိုတော့ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရိုက်လို့ မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ လျှောက်ရှာရင်းနဲ့ ဒီ website လေး တစ်ခုတွေ့ လို စမ်းကြည်တဲ့ အခါမှာ စာရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ အားလုံးကို ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ။
မှတ်ချက်။ ဒီအပေါ်က သွင်းခိုင်းထားတဲ့ files နှစ်ခုလုံးကို လုံးဝ ပြန်ပြီးထုတ်ပြစ်လိုက်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Ehlar site က download link http://zawgyi-keyboard.googlecode.com/files/zawgyi-keyboard-layout-l.zip file ကို ဒေါင်းပြီး ပြန်စပါ။ ဒီ mhuthaw blog post ကို လဲ အထူး ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေစေအောင် ပြန်ဝေမျှတာပါ။
ုသူငည 3:07 PM
ကိုAnonymous ရေ.. အပေါ်က ဖော်ပြတဲ
3. http://www.ehlar.com/2012/11/windows-8.html အတိုင်း အားလုံး လိုက် လုပ်တဲ့ အခါ ကျနော့် ကွန်ပြူတာ မှာ အင်္ဂလိပ် စာ လုံးဝ ရေး လို့ မရ တော့ဘူး။ ကျနော်လိုချင်တာ က မြန်မာ လို နဲ့ အင်္ဂလိပ် ၂ခု စလုံး ရေး လို့ ရ ပေါ.. ကူညီပါအုံး
sailing.pyay@gmail.com ကိုမေးပါ ဂျီတော့ တိုက်ပင်ရိုက်ပင်ရိုက်ပီးမပေါ်သူများ
ကျေးဇူးပဲ ဒီပို့စ်အတိုင်းလုပ်တာ ဖတ်လို့ကော ရေးလို့ကောရသွားတယ်။ firefox မှာပါ
thanksalot for all who shared valuable knowledge...look like national treasure,,
ဒီပိုစ့်ကို အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်...
pyae sone 8:38 PM
media fire mar ma shi top buu
bal lo lote ya mar lae ... pyaw pya par own nor/
Feel free to surf to my web page: http://corona.Xpf.io/index.php?Title=利用者:ColleenSe
Kyaw naing oo 3:06 PM
၀င်းဒိုး ၈ မှာမြန်မာယူနီကုဒ် ဘာဖြစ်လို့ ကြည့်မရတာလဲဆိုတာသိရင်ပြောပြပေးပါဦးနော်။
Feel free to visit my web site - wiki.oxtli.com.mx
ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလို့ မရလို့ပါခင်ဗျ။ mediafire လင့်မှာ deleted file လို့ပဲ ပြနေပါတယ်။ ကူညီပါဦး။